Mogadishu Journal » Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xiisada Beledxaawo
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed (Madoobe) ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisada ka taagan Magaalada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, taasi oo ka dhalatay Darbiga Dowladda Kenya ay ka dhiseyso xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu sheegay Axmed Madoobe arrinka ku saabsan xuduuda in ay tahay mid mudo dheer soo socotay, soona martay heerar kala duwan, wuxuuna tilmaamay in arrintan dhawaan ay ka wada hadli doonaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya.
“Een horta Soomaaliya iyo Kenya xuduud aad u dheer ayay leeyihiin, laba Guddi ayaa loo diray xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, si ay u soo xaqiijiyaan waxa jira, hadana guddi kale ayaa la diray oo Dowladdan ka tirsan, waxaa hada la wada sugayaa in labada Madaxweyne ay isu tagaan, go’aan siyaasadeedna laga gaaro.” Ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Dowladda Kenya kama hadasho Dhacdooyinka la xiriira Dhismaha Darbiga kenya iyo Xiisadaha ka dhasha, waxa ayna bilawga dhismaha sheegtay in ay ugu tala gashay ku yareynta Weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan.
Maamulka Gedo oo ku dhawaaqay in ay ciidamo u dirayaan Beledxaawo, si ay uga difaacaan Kenya